अङ्ग काटेर बाँच्नुपर्दा |
अङ्ग काटेर बाँच्नुपर्दा
प्रकाशित मिति :2015-06-28 11:46:40
क्यान्सरको लक्षणबारे सामान्य जानकारी नभएर धेरै महिला अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्छन् । यसको परिणाम उनीहरूले शरीरको अङ्ग नै काटेर फाल्नुपर्ने कठोर पीडा भोग्नु परिरहेको छ ।
पिसाबमा लगातार रगत देखिन थालेपछि अस्पताल पुगेकी चितवनकी धनमाया लामाको पिसाबथैली नै काटेर फाल्नुपर्‍यो । अरूलाई भन्न लाज हुन्छ भनेर लामो समयसम्म रोग लुकाएकी धनमायाले आफूलाई क्यान्सर लागेको पत्तै पाइनन् । सुरुमा पिसाबमा रगत देखियो भन्दा अरूले नराम्रो सोच्लान् कि भन्ने डर लाग्यो । खप्न नसकेर अस्पताल पुगेपछि डाक्टरले क्यान्सर धेरै ठाउँमा फैलिएकाले पिसाबथैली नै काट्नुपर्छ भने । अनि मात्रै उनले रोग फैलिइसकेको थाहा पाइन् ।
धनमायालाई रोग लुकाएकोमा अहिले निकै पछुतो छ । क्यान्सर लागेर पिसाबथैली काटेपछि कृत्रिम पिसाबथैली राखेकी धनमाया रोग फाल्दा शरीरको अङ्ग नै काट्नुपर्ने अवस्थाले जीवनभर दुःख हुने बताउँछिन् ।
क्यान्सरका कारण पिसाबमा रगत देखिन्छ भन्ने जानकारी भएको भए अङ्ग काट्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन भन्ने अहिले मात्र उनले बुझिन् । उनी भन्छिन्, ‘पढे–लेखेको पनि छैन, के रोग लाग्दा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएका कारण यस्तो भयो ।’ धनमायाको भनाइले के पनि देखाउँछ भने अहिले पनि धेरै नेपाली महिलालाई रोगबारे सामान्य जानकारीसमेत छैन । धनमायाजस्तै क्यान्सरका कारण अकालमा मृत्युको मुखमा पुग्ने नेपाली महिला धेरै छन् । धनमाया पिसाबमा रगत देखिनेबित्तिकै अस्पताल पुगेकी भए शरीरको अङ्ग काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था नआउने उपचारमा संलग्न क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. कपेन्द्रशेखर अमात्य बताउँछन् ।
आफ्नो शरीरको अङ्ग काटेर फाल्नुपर्ने भए पनि अरू दिदीबहिनीलाई त्यस्तो नहोस् भनेर उनी आफ्नो रोगबारे पछिल्लो समय खुलेर कुरा गर्न थालेकी छिन् । शरीरमा बोकेर हिँडेको कृत्रिम पिसाबथैलीले हरेक क्षण क्यान्सरले अङ्ग काटेको सम्झना गराइदिँदा निकै पीडा हुने धनमायाको भनाइ छ ।
पाठेघरमा मासु पलाएपछि अस्पताल पुगेकी काठमाडौंकी लक्ष्मी वैद्य पनि सुरुमा रोग लुकाएकोमा अहिले पछुताएकी छिन् । पाठेघरमा देखिएको ट्युमर मलद्वारसम्म फैलिएपछि मलद्वार नै फाल्नुपर्ने अवस्था आयो लक्ष्मीलाई । पिसाबमा रगत देखिने, तल्लो पेट दुख्ने, खान मन नलाग्नेजस्ता समस्या भए पनि अरूलाई सुनाउन लाज लागेर चुपचाप बसेकी लक्ष्मी रोगले नथलिएसम्म अस्पताल गइनन् । रोगले च्यापेपछि अस्पताल पुग्दा धेरै ढिला भइसकेको थियो । उनको मलद्वार र पाठेघर दुवै फाल्नुपर्‍यो । कृत्रिमा मलद्वार राखेर निको हुने दिन कुरिरहेकी लक्ष्मीलाई यो रोगले यति सताएको छ कि उनी ‘यस्तो रोग शत्रुलाई पनि नलागोस्’ भनिरहेकी छिन् ।
रोगले च्याप्दै गएपछि शारीरिक र मानसिक रूपमा समेत कमजोर भइन्छ । परिवारले पनि वास्ता नगर्दा झनै दोहोरो समस्यामा परिने लक्ष्मीको बुझाइ छ । आफ्नो अनुभव सुनाउँदै लक्ष्मी भन्छिन्, ‘सधैँको बिरामी भनेर घरकाले पनि वास्ता गर्दैनन्, उपचारमा पैसा पनि धेरै सकियो, बाँच्दिनँ कि पो जस्तो लाग्दछ ।’ आफ्नो समस्या भन्दा अरूले के भन्लान्, नराम्रो पो सोच्दछन् कि भन्ने डरले धेरै महिला यस्तो रोग पालेर बसिरहेका हुन्छन् । यो मौनता तोड्नुपर्छ ।
स्तन क्यान्सर भएपछि दायाँस्तन काटेर फालेकी भक्तपुरकी मैया डुमरू निकै तनावमा छिन् । छोराछोरीले साथ दिए पनि समाजमा हुने अपमान भने निकै पीडादायी हुने उनको अनुभव छ । केटा मानिस बिरामी पर्दा श्रीमतीले स्याहार गर्नुपर्ने भए पनि श्रीमती बिरामी हुँदा श्रीमानले विवाहको विकल्प खोज्ने अवस्था रहेकाले घरपरिवार र समाजबाट अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था रहेको मैयाको बुझाइ छ ।
क्यान्सरकै कारण शरीरको अङ्ग काटेर फाल्नुपर्ने र साथ दिनुपर्ने श्रीमानले अर्को विवाह गरेपछि महिलाले भोग्ने सामाजिक अपमान भने निकै दर्दनाक हुन्छ । त्यस्तै दर्दनाक अवस्था भोगेकी विष्णुमाया थापा आफ्नो उपचार र छोराछोरीको पालनपोषण कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छिन् । आम्दानी गर्ने श्रीमान् टाढा भएपछि आफन्तले पनि साथ नदिएको अनुभव उनीसँग छ । परिवारको माया पाउनुपर्ने समयमा सबैले बेवास्ता गर्न थालेका छन् । तर पनि विष्णुमाया अहिले निको हुने दिन कुरेर बसेकी छिन् । शरीरको अङ्ग काटेर फाल्दाको चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर राम्रोसँग चलिरहेको घरपरिवारमा पनि खटपट सुरु भएको छ । घर भताभुङ्ग हुने डरले उनलाई सताउन थालेको छ ।
फोक्सोको क्यान्सर भएर पाँच महिना अगाडि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुगेकी रुकुमकी कलशा रानालाई आफूले तान्ने गरेको चुरोटको धुँवाको सर्कोले क्यान्सर हुन्छ र क्यान्सरले आफूलाई नराम्ररी खान्छ भन्ने लागेको थिएन । छोराछोरीले खान हुँदैन भन्दा पनि उनले मानिनन् । क्यान्सरको उपचार गराइरहेकी कलशालाई अहिले पछुतो लाग्न थालेको छ । उपचारपछि घरमा गएर काम गर्न सक्दिनँ कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । धनमाया, लक्ष्मी, विष्णुमाया र कलशा केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।
लामो समयदेखि क्यान्सर रोगीको उपचार गर्दै आएका विशेषज्ञ डा. कपेन्द्रशेखर अमात्य पाठेघर र स्तन क्यान्सरका बिरामीले यो लाजको कुरा हो भन्ने सोचाइ राखिदिँदा समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् । परिवारले पनि उपचार गर्नुको साटो विकल्प खोज्न थाल्दा महिला थप समस्यामा पर्ने उनको बुझाइ छ । परिवारले साथ नदिएका कारण एकपटक अस्पताल आएका महिला नियमित अस्पताल आउन सक्ने अवस्था नरहेको डा. अमात्य बताउँछन् ।
जनस्वास्थ्यमा कलम चलाउँदै आएकी डा. अरुणा उपे्रती स्वास्थ्य संस्थामा गएर आफ्ना कुरा खुलेर राख्न सक्ने अवस्था नभएकाले पनि महिलामा क्यान्सरको जोखिम बढ्दै गएको बताउँछिन् । महिलामैत्री स्वास्थ्य संस्था नहुँदा महिलाले आफ्नो समस्या नभन्ने अनि क्यान्सर भएर अङ्ग नै काट्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अब सरकारले महिलाको स्वास्थ्यमा लगानी गर्न ढिलो गर्न नहुने उनको तर्क छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा महिला स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था भए धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने डा. उपे्रती बताउँछिन् ।
क्यान्सरका कारण शरीरको अङ्ग काटेर फालेका महिलालाई पारिवारिक सहयोगका साथै मनोसामाजिक परामर्शसमेत आवश्यक पर्ने मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सरोजप्रसाद ओझाको भनाइ छ । रोगले कमजोर भएका महिलालाई सहयोग गर्ने समयमा हेला गर्दा आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा मनोसामाजिक परामर्श दिन नसक्ने हो भने कडा खालको मानसिक रोगको समस्या आउन सक्छ । त्यसैले परिवारले यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने डा. ओझाको सुझाव छ ।
(मीना स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)
प्रकाशित मिति : २०७२ असार १३ गते आईतवार